त्रियुगा-१२ मा पुन: मतदान गर्न एकीकृत समाजवादीको माग- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका मेयर उम्मेदवार बलदेव चौधरीले वडा नम्बर १२ मा पुन: मतदान गर्न माग गरेका छन् । उनले पुन: मतदान नगरी मतगणना गरिएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मतदान अधिकृतले नै पुन: मतदान हुने सूचना प्रकाशित गरेर स्थगित गरेपछि पनि मतगणना सुरु गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
'बाजुरा जिल्ला र त्रियुगामा एकै प्रकारको घटना भएको हो । एउटा ठाउँमा आयोगले पुनः मतदान गरायो र अर्को ठाउँमा भने मतगणना सुरु गरेको छ‚' चौधरीले भने, 'मतदान कार्यक्रम ढिलो गर्ने नियतले काम भयो । त्यस विषयमा विवाद भएपछि साढे ४ बजे पुन: मतदान गर्ने भनेर निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो । ११ दिन ढिलो गरी मतगणना सुरु गरिएको छ ।'
उनले पुन: मतदान हुने भन्दै सो वडाको मतपेटिकालाई छुट्टै ठाउँमा भण्डारण गरिएको बताए । त्रियुगा-१२ मा पुन: मतदान गर्ने वा त्यहि मतदानलाई सही मानी मतगणना गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा लामो समयसम्म अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।
'निर्वाचन आयोगले पुन: मतगणना नगरेर मतगणना गर्ने काम गरेको छ; यो कानुनसम्मत छैन र स्वेच्छाचारी भयो । यो काम विधिसम्मत छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दादागिरी गरेर कानुनको धज्जी उडाउने काम भएको छ‚' चौधरीले भने ।
'योजनाबद्ध रुपमा गरिएको कामविरुद्ध कानुनी रुपमा चुनौती दिन्छु । यसमा संलग्न सबैलाई अदालतमा उभ्याउँछु‚' चौधरीले भने।
चौधरीले आफ्नो राम्रो पकड रहेको वडामा गडबढ गरिएको बताए । 'त्यो मेरो वडा हो र २०५४ सालको स्थानीय चुनावदेखि नै त्यस वडाबाट मलाई ८० प्रतिशत मत आएको हो‚' चौधरीले दाबी गरे, 'कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारहरूसँग निर्वाचन अधिकृतहरूको साँठगाँठ रहेको देखिन्छ ।'
त्रियुगा नगरपालिकामा जारी मतगणनामा चौधरी दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । पछिल्लो गणनाअनुसार मेयरमा नेपाली कांग्रेसका बसन्तकुमार बस्नेत ६ हजार २ सय २६ मतका साथ पहिलो स्थान रहेका छन् भने चौधरी ५ हजार २ सय ७६ मतका साथ दोस्रो स्थानमा छन् । त्यसैगरी नेकपा एमाले भागवत राउत ४ हजार ६ सय ९३ मतका साथ तेस्रो स्थानमा छन् । त्रियुगामा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १७:५४
नीति तथा कार्यक्रममाथि लिङदेनको प्रश्न- 'किसानको कुरा कहाँ छ ?'
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरुको चुनावलक्षित कार्यक्रम मात्रै भएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद लिङदेनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मल किन्न नपाएका किसानले अर्को वर्ष पाउने सुनिश्चितता नभएको भन्दै उनले यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दासमेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा अर्को वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने नीति नसमेटिनु दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो ।
‘मैले नीति तथा कार्यक्रम कसरी बन्छ भनेर विगत ५ वर्षयता हेरिरहेको छु । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनुभएका प्रधानमन्त्रीले वा आफ्नो सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आफ्नो जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति ल्याउनु भयो । मन्त्रीजीहरुको जिल्लामा ठूला ठूला बाटोहरु बनाउने नीति कार्यक्रममा छ । देशको नीति कार्यक्रम यही हो ? मैले यसो सम्झन्छु, यो नीति कार्यक्रमभित्र मैले मेरो गाउँका मानिसहरु वर्षा लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन् । तिनीहरुको बारेमा यो नीति कार्यक्रममा कहाँ छ कुरा ? अर्को साल मल पाउने कुराको सुनिश्चितता कहाँ छ ? कहीँ देखिन्न नीति कार्यक्रमले त्यस्तो विषयहरु छुनु पर्छ कि पर्दैन ?' सांसद लिङदेनले प्रश्न गरेका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १७:५०